Jodasy Iskariôta - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Jodasy Iskariota)
I Jodasy na Jodasy Iskariôta dia iray amin' ireo mpianatr' i Jesoa roa ambin' ny folo lahy, maty teo anelanelan' ny taona 30 sy 33 taor. J.K. Izy ilay namadika an' i Jesoa (na Jesosy) ka nanamora ny fisamborana azy.
Manoroka an' i Jesoa i Jodasy, taonjato faha-13.
Araka ny Testamenta Vaovao ao amin' ny Baiboly kristiana, i Jodasy Iskariôta dia ilay apôstôly nanolotra an' i Jesoa Kristy tamin' ny Sanedrina (na Sinedriona). Teraka tao Jodea (na Jodia) izy. Izy no mpiandraikitra ny fananana sy ny vola tao amin' ny vondron' ny apôstôly notarihin' i Jesoa. Μisy filazantsara apôkrifa izay mitondra ny anarany, dia ny Filazantsaran' i Jodasy.
2 I Jodasy Iskariôta araka ny Testameta Vaovao
2.1 Ny toetrany sy ny andraikiny
2.2 Ny nahafatesany
3 Ny Evanjelin' i Jodasy
Atao hoe Jodasy Iskariôta izy mba hiavahany amin' i Jodasy Zelôta na Joda Zelôta. Ny hoe Iskariôta dia mety midika hoe "avy amin' ny fokon' i Isakara". Ὶούδας Ὶσκάριωθ / Ioudas Iskariôth na Ὶούδας Ὶσκαριώτης / Ioudas Iskariôtês no fiantsoana azy amin' ny teny grika. איש־קריות /ʾIsh-keriyyôt amin' ny teny hebreo. Tsy tokony hafangaro i Jodasy Tadeo (na Joda Tadeo na Tadeo na Joda) sy i Jodasy Iskariôta.
I Jodasy Iskariôta araka ny Testameta VaovaoHanova
Ny toetrany sy ny andraikinyHanova
I Jodasy manoroka an' i Jesoa, sary nataon' i Gustarve Doré,
Ao amin' ny Evanjely araka an' i Joany (Joa 12.6) dia lehilahy tia vola tafahoatra sady ratsy saina i Jodasy. Araka ny Evanjelin' i Matio sy Lioka dia izany fitiavam-bola tafahoatra izany no nahatonga azy namadika sy nanolotra an' i Jesoa tamin' ireo mpisoronabe tao Getsemany (na Getsemane) rehefa azony ny vola telopolo.
"Tsy ny fiahiany ny mahantra anefa no nilazany an' izany, fa noho izy mpangalatra sy mpitana ny kitapom-bola, ary nifetsy izay nalatsaka tao anatiny." (Joa 12.6, Ny Baiboly Masina).
Ao amin' ny Evanjelin' i Matio sy Marka ary Lioka dia nahafantatra ny hamadihana azy i Jesoa. Rehefa hitan' i Jodasy ny vokatry ny zavatra nataony dia tra-panenenana izy ka nananton-tena ka maty izy. Misy fitantarana samihafa momba ny nahafatesan' i Jodasy ny boky ao amin' ny Testamenta Vaovao: ny ao amin' ny Evanjelin' i Matio (Mat 27.3-5), ny Asan' ny Apôstôly (Asa 1.16-20).
"3 Ary Jodasy, ilay namadika Azy, raha nahita fa nohelohina Jesosy, dia nanenina ka namerina ny sekely volafotsy telo-polo tamin' ny lohan' ny mpisorona sy ny loholona 4 ka nanao hoe: Nanota aho, satria namadika rà marina. Fa hoy ireo: Ahoanay izany? fa asa anao. 5 Ary nony natsipiny teo amin' ny tempoly ny vola, dia niala izy ka lasa nandeha, dia nanao tadimody ary nananton-tena, ka dia maty." (Mat 27.3-5, Ny Baiboly)
"16 Ry rahalahy, tsy maintsy tanteraka ilay Soratra voalazan' ny Fanahy Masina tamin' ny vavan' i Davida momba an' i Jodasy, izay nitarika ny mpisambotra an' i Jeso; 17 fa anisantsika ihany koa izy, sady nanana anjara tamin' izao fandraharahantsika izao. 18 Nefa nahazo saha tamin' ny tambin' ny otany iny lehilahy iny, ary lavo nihohoka izy ka vaky ny kibony, sady niparitaka ny tsinainy. 19 Zavatra fantatry ny mponina rehetra eto Jerosalema izany, ka io saha io dia nahazo anarana tamin' ny fiteniny hoe Haseldamà, izany hoe sahan-drà. 20 Ary izany indrindra no voasoratra ao amin' ny bokin' ny Salamo hoe: Aoka ho lao ny fonenany, ka tsy honenan' olona akory; ary koa: Aoka ho lasan' olon-kafa ny anjara raharahany." (Asa 1.16-20).
Ny Evanjelin' i JodasyHanova
Ny Filazantsaran' i Jodasy na Evanjelin' i Jodasy dia soratra natao tokony ho tamin' ny taonjato faharoa, izay isan' ireo atao hoe filazantsara apôkrifa. Tao amin' ny fikambanana kristiana nefa nanana firehana gnôstika no nipoirany. Tamin'ny taona 1978 no nahitana io soratra io amin'ny teny kôpta.
Manamarina ny famadihana nataon' i Jodasy an' i Jesoa ny mpanoratra an' ilay filazantsara: Nahazo hafatra avy amin' i Jesoa i Jodasy hoe: "Ianao no hanao sorona ny olombelona izay itafiako". Araka io filazantsara io dia i Jodasy no mpianatra tamin' ny roa ambin' ny folo nahatakatra ny zavatra tian' i Jesoa hatao teto ambonin' ny tany, araka ny fikendren' Andriamanitra.
↑ Ny Baiboly prôtestanta malagasy manoratra hoe: Akeldama.
↑ Salamo 69.26: "Aoka ho foana ny fonenany, ary tsy hisy mpitoetra intsony ao an-dainy." (Ny Baoboly Masina; Sal 69.25 ao amin' ny Baiboly prôteranta)
↑ Salamo 109.8: "Aoka hohafohezina ny androny, ary aoka ho lasan' ny hafa ny anjara raharahany!" (Ny Baiboly Masina)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Jodasy_Iskariôta&oldid=1037543"
Dernière modification le 6 Septambra 2021, à 18:34
Voaova farany tamin'ny 6 Septambra 2021 amin'ny 18:34 ity pejy ity.